संस्थापक अध्यक्ष महताेले गरे एनआरएनएको नवाैं विश्व सम्मेलन बहिस्कार – Hotpati Media
संस्थापक अध्यक्ष महताेले गरे एनआरएनएको नवाैं विश्व सम्मेलन बहिस्कार
२८ आश्विन २०७६, मंगलवार २१:२१ मा प्रकाशित (7 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ३ मिनेट
काठमाडौं – गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को नवौं विश्व सम्मेलनमा संस्थापक अध्यक्ष डा.उपेन्द्र महतो देखिएनन् ।
काठमाडौंमा सुरु भएको विश्व सम्मेलनमा उनी नदेखिनुलाई सबैले गम्भीरताका साथ हेरेका छन् । विश्वमा विभिन्न १०८ मुलुकमा फैलिएका ८५ लाखभन्दा गैर आवासीय नेपालीहरुको संगठनको नवौं विश्व सम्मेलनमा संस्थापक अध्यक्षको उपस्थिती नरहनुलाई निकै गम्भीरताका साथ हेरिएको छ ।
सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा डा. महतोको मन्तव्य थियो । कार्यक्रमको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेव भण्डारीले गरेकी थिइन । कार्यक्रममा पहिला वक्ता परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भवानी राणा, शेष घले पछि उनको बोल्ने पालो थियो ।
कार्यक्रममा उनी नदेखिएपछि उनलाई मन्तव्यको लागि बोलाइनए । डा. महतोपछि राष्ट्रपति भण्डारी र अध्यक्ष भवन भट्टको मन्तव्य राख्ने कार्यक्रम तय भएको थियो ।
संस्थापक मात्रै नभएर सन् २००३ मा स्थापना भएको एनआरएनएको ३ कार्यकाल अध्यक्षको रुपमा काम गरेका छन् । गैर आवासीय नेपालीहरुले अहिले आफूलाई जसरी गैर आवासीय नेपाली हुँ, हामीले नेपालमा सहजै लगानी गर्ने बातावरण चाहियो भनेर भन्दै आएका छन्, त्यो अभियानको नेतृत्वकर्ताको रुपमा उनलाई चिनिने गरेको छ ।
तै पनि कार्यक्रममा उनलाई नदेख्दा धेरैले यो सम्मेलनलाई संस्थापक अध्यक्षले बहिस्कार गरेको रुपमा आंकलन गरेका छन् । यो आंकलन यसर्थमा पनि सत्य साबित हुन सक्छ की, डा. महतोले एनआरएनएमा परोक्ष रुपमा जे नै भएपनि प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक कित्ताकाँट हुन नहुने, एनआरएनएमा राजनीतिको रंग छर्न नहुने तर्क गर्दै आएका थिए ।
यो सम्मेलनले आगामी २ वर्षका लागि नयाँ कार्यसमिति चयन गर्ने भएकाले यहाँ देखिएका उम्मेद्वार प्रत्यक्ष रुपमा राजीतिक रंग लागेका छन् ।
वर्तमान उपाध्यक्षद्वय कुमार पन्त र कुल आचार्यको समूह चुनावी मैदानमा रहेको छ । पन्त नेकपा र आचार्य काँग्रेस निकट उम्मेद्वारको रुपमा चर्चामा रहेका छन् ।
महतोको अपेक्षा भने कम्तीमा अध्यक्ष पद सर्वसम्मत होस भन्ने नै थियो । यहाँ राजनीति नघुसाउने र बरु एनआरएनएहरुले नेपालमा विदेशमा हुँदा आर्जन गरेको ज्ञान, प्रविधि, सीप र पुँजीलाई ल्याउने र नेपालको आर्थिक विकासमा योगदान दिने भन्ने नै रहेको थियो ।
अहिले ‘म, मेरो, एनआरएनए र मेरो नेपाल’ भन्ने नारासहित सुरु भएको सम्मेलनमा विश्वभरबाट २ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी रहेको आयोजकले जनाएको छ ।